बिग्रेको घडीले नाडीको शोभा दिन्छ तर समय हेर्न काम लाग्दैन
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो र मूल चुरो एवंम् मान्यता भनेकै आवधिक चुनाव हो । यसको सुन्दरता भनेकै व्यक्ति, पार्टी, आफ्नो आस्था र विचारको निर्वाध (डर, त्रास, भय र आतंकको छायाँ नभएको भनेर बुझ्नुपर्छ चुनावको क्रममा जे जस्ता हर्कत जो जसबाट भए, गरिए पनि) छनौट हो । चुनाव हो । चुनावले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्ने र शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने सुवर्ण मौका हो ।
मुलुक अब कता जान्छ ? खुल्दुलीको शुरुआत
पेशल आचार्य -- नेपालमा स्थानीय तह चुनाव हुनु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो भयो । अझ दोस्रो चरण चुनाव हुनै बाँकी छ । पहिलो चरणको चुनाव पनि हुन्छ/हुन्नका बीच भएरै छाड्यो । सवाल कसले कति स्थानमा जित्यो ? कसले कति सिट पायो ? कसले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा खाता खोल्यो भन्ने होइन ।
राजनीतिप्रति रानीहरुको खासै चासो रहँदैन थ्यो तर आफ्ना वंशको राज्य निरन्तरताले गर्दा चासो देखिनु पर्छ र देखिन्थ्यो । चासो छैन भन्दै चासो देखाउने चलन पुरानै हुँदो रहेछ दरबारमा । गान्धारी दिदी वास्तवमा निस्पृह र निर्मोही राजमहिषी हो । उहाँमा दम्भ पनि थिएन, लोभ पनि देखिँदैन थ्यो र एउटा पतिव्रता नारी पनि हो ।
पूराना दलहरुको नाडी छाम्दै, राजनीति जितिन रन्जुले !
कहिलेकाहीं हारमा पनि जितको सुगन्ध मगमाउदो रहेछ । हार, हारजस्तो नभई जितको आभाष र गर्वानुभूतिले छाती तन्काएर हिड्न मन लाग्दो रहेछ । सायद यस्तै अनुभूतिजन्य आभाले रन्जु र विवेकशील नेपालीलाई पक्कै पुलकित र आशावादी बनाएको हुनुपर्छ । धुमिल राजनीतिको परिदृश्यमा नयाँ आलोक र नवीनतम आयामहरू देखिनु खुशी र आनन्दको संकेत हो । देशको राजनीतिक आकाशमा देखिएको कालो बादल फाट्ने छनक हो । देशको हिलोमैलो सोहोर्ने, देशलाई नै सफाई गर्ने रन्जुको चाहनालाई मुर्तरुप दिने पूर्वसंकेत र पूर्वाभ्यास हो ।
खराव आचरण सुशीला कार्कीको हो कि ? तपाईहरुको महाशय ?
न्यायिक निष्ठा, स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक फैसलालाई जसले आफ्नो जीवनको आदर्श बनाएर बसेको छ । कसैको लोभ, लालच, डर, त्रासमा नपरी जसले बुद्दिमतापूर्ण न्याय सम्पादन र न्यायिक अडान राखेको छ, उसैलाई दण्डित गर्ने विद्रूप प्रहसन गरिदैछ । न्याय किनबेच, मोल तोल र खरिद बिक्री हुने कुप्रथाको विरुद्ध जो धावा बोल्दै छ । जेहाद छोड्दै छ उसैलाई सजायको डण्डा बर्साउने कुनियतले गर्दा देशभक्त हर नेपालीमा चोट र भयको भूतले तर्साएर राखेको छ ।
विवादको अन्तर्यमा पुगेर समस्याको दिगो समाधान निकालौँ
हरिविनोद अधिकारी - प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ र त्यसमा नेपाली समाज विभाजित भएको अवस्था छ । संसदमा एक चौथाई सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराउने बित्तिकै स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम कार्की सर्वोच्च अदालत नजाने कुरा छँदैछ । जाने कुरा पनि भएन । तर सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यसरी स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरु किन लाग्नु भयो भन्ने कुरा रहस्यमय नै छ ।
बलात्कार गरेर बुद्ध जन्माउने तिम्रो प्रजातन्त्र भो चाहिएन्
'मनी, मसल्स र माफिया’ हावी भएको राजनीतिले देश आक्रान्त छ । आदर्श स्खलित भएको चरित्रको क्षय र इमान्दारिता ह्रासोन्मुख आजको राजनीति अनि यसको संस्कारको जल्दोबल्दो परिचय हो यो । इमान, जमान ,वाचा बन्धन र बाचा गरुन्जेलको लागि मात्र भएको छ । इमान र नैतिकताको धरातल क्षणभरमा धराशायी हुन्छ । विश्वास र भरोसा कतिबेला टुट्छ थाहा हुन्न । भाइ, भाइमा सवैभन्दा ठूलो संशय र आशंका को खाडल छ । देशलाई स्थानीय चुनाव लागेको छ ।
दुई चरणमा चुनाव देशलाई थप व्ययभार
पेशल आचार्य-- पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गने र दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते घोषणा भएपछि अब चुनावै नहुने हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न थालेको छ । दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावमा नयाँ पुस्ता आशावादी भएर लागेको अवस्था छ । दुई चरणमा हुने चुनावले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा र दोस्रो चरणको चुनाव १, २, ५ र ७ मा हुने भएपछि निर्वाचन आयोगले अघिबाटै मुद्रित गरेका निर्वाचन सामग्रीहरू काम नलाग्ने भएका छन् । भारतको जुँगाका तालमा चुनावलाई अघिपछि पार्नु, चुनावका माहोलमा संविधान संशोधन गर्नु, बजेटलाई जेष्ठ १५ गतेबाट पछि धकेलेर असारको ३० गतेलाई सार्नु यी सबै चुनाव नहुने संकेतहरू हुन्– एकथरी बुद्धिजीवीहरू यसो भन्न थालेका छन् ।
हरिविनोद अधिकारी- साँच्चै एउटा गज्जब छ नि । द्रुपद महाराजलाई जितेर अपमानित गर्दै गुरु द्रोणाचार्यको पाउमा लगेर पछार्ने त कौरब र पाण्डव नै हुन्, झन् त्यसमा पनि मेरो छोरो अर्जुन नै मुख्य थियो रे, गुरुको आज्ञापालनमा सबैभन्दा ।
नयाँ दल र सरकारको पाइन
नरेन्द्रराज पौडेल-- ‘समय एव करोति वलावलम्’ । शायद नीतिशास्त्रमा त्यसै भनिएन होला । समयको अगाडि बिचरो मान्छे कति निरीह लाग्छ । कति निम्छरो लाग्छ । आफूलाई निकै अब्बल सम्झिने नायकहरु समयप्रवाहमा कता–कता हराए ! आफूलाई शासक सम्झिने कुल घरानाहरु समयको हुण्डरीमा बेलुन बनेर नाचिरहे ।
पेस्तोल र गोलीसहित ठमेलबाट एक पक्राउ
ओली र दाहालबीच दुई घन्टा वार्ता
‘श्वेतपत्र झुटको खेती’
सम्पदा पुनःनिर्माणमा पनि ‘सिन्डिकेट’ हावी : मेयर शाक्य
मध्यपुर थिमीका नगरप्रमुखमाथि फलामे रडले आक्रमण